निर्वाचनका रोचक परिदृश्य - निर्वाचन - साप्ताहिक
१० र २१ मंसिरमा दुई चरणमा प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ । पहिलो चरणमा ३२ वटा हिमाली जिल्ला तथा दोस्रो चरणमा ४५ वटा पहाडी एवं तराईका जिल्लामा निर्वाचन हुन लागेको हो ।
आगामी ५ वर्षका लागि केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश सरकार निर्माण गर्ने यो निर्वाचनलाई लिएर यतिबेला प्रमुख दलहरू कडा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेसले राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक आदि दलसँग मिलेर लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण गरेको छ भने एमाले–माओवादीले केही अन्य वामपन्थी दलहरूसँगको सहकार्यमा वामगठबन्धन निर्माण गरेका छन् । कतिपयले यी प्रयासलाई मुलुक दुई ध्रुवीय समीकरणतर्फ डोरिएको अर्थमा हेरेका छन् भने कतिपयले यसलाई सत्तामुखी गठबन्धनसमेत भनेका छन् ।
१ करोड ५४ लाख २७ हजार ७ सय ३१ मतदाताले आगामी ५ वर्षका लागि नयाँ जनप्रतिनिधि छान्दैछन्, जसमध्ये पहिलो चरणमा हुने निर्वाचनमा ३२ लाख २८ हजार ८ सय ७९ मतदाता छन् भने दोस्रो चरणमा १ करोड २१ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ जना मतदाता छन् । यसअघि निर्वाचन आयोगले १० हजार ७ सय ७१ मतदानस्थल तथा १९ हजार ८ सय ९ मतदान केन्द्र कायम गरेको थियो, जसमा केही थपघट हुन सक्ने आयोगले जनाएको छ ।
पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि ५ तथा दोस्रो चरणका लागि १६ कात्तिकमा उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता भैसकेकाले पनि चुनावी सरगर्मी ह्वातै बढेको छ । यो चुनावी महायज्ञमा केन्द्रीय तहका नेतादेखि स्थानीय कार्यकर्तासम्म होमिएका छन् । दलहरू निर्वाचनमा होमिएसँगै यससँग जोडिएका रोचक घटनाहरू पनि सतहमा आउन थालेका छन् । जनताको मन जित्न कतिपय उम्मेदवारले पारिश्रमिक नलिने घोषणा गरिरहेका छन् भने कोही विकासका ठूला–ठूला आश्वासन बाँडिरहेका छन् । यस क्रममा आरोप–प्रत्यारोपको क्रम पनि उत्कर्षतर्फ लम्कदैछ ।
निरन्तरका विजेता मैदानमा
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा केही हेविबेट नेताहरू निरन्तर छैटौं पटक निर्वाचित हुने गृहकार्यमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा २०४८ सालयताका सबै पाँचवटा निर्वाचनमा डडेल्धुराबाटै निर्वाचित भएका छन् । यसपटक पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका देउवाले जित हासिल गरे उनी छैटौं पटक निर्वाचन जित्ने संसारका कमै नेतामा पर्नेछन् । त्यसो त देउवा सुदूरपश्चिमबाट लगातार पाँच पटक चुनाव जित्ने एक्ला नेता हुन् ।
कांग्रेसकै अर्का नेता रामचन्द्र पौडेल पनि तनहुँबाट छैटौं पटक चुनावी मैदानमा छन् । पौडेल ०४८ यताका सबै निर्वाचनका अपराजित नेता हुन् । ०४८, ०५१ तथा ०५६ गरी तीन पटक सुनसरीबाट सांसद भएका विजयकुमार गच्छदार ०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा समेत विजयी भएका थिए ।
०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा पनि सभासद निर्वाचित गच्छदार अहिले छैटौं पटक प्रतिस्पर्धामा छन् । भक्तपुरबाट २०४८ यताका पाँचवटै निर्वाचन जितेका नेमकिपाका अध्यक्ष नारायमान विजुक्छे भने यस पटकको चुनावी प्रतिस्पर्धामा छैनन् । बिजुक्छेले आफूले युवा पुस्ताका लागि बाटो खुला गरेको भन्दै उम्मेदवारी दिएनन् ।
टिकट नपाउने चर्चितहरू
मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा केही चर्चित अनुहार देखा पर्नेछैनन्, जसमा नेपाली कांग्रेसका नेता केबी गुरुङ, मनमोहन भट्टराई, गुरुराज घिमिरे, एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, पूर्वमन्त्री भानुभक्त जोशी, अमृत बोहरा, केशव बडाल, अग्नि खरेल, माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापा, अमिक शेरचन, लीलामणि पोखरेल, नेककिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे आदि छन् । अझ रोचक त के भने उम्मेदवार हुने निश्चितजस्तै मनिएका केही युवा अनुहार पनि चुनावी प्रतिस्पर्धाको रिङबाट आउट भए, जसमा नेपाली कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङ, बद्री पाण्डे, एमालेका ठाकुर गैरे, माधव ढुंगेल, खिमलाल भट्टराई, नीरज आचार्य, माओवादीका गणेशमान पुन, लेखनाथ न्यौपाने, हिमाल शर्मा, हेमराज भण्डारी आदि छन् ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा केही विवादित अनुहार पनि प्रतिस्र्धामा छन् । प्रहरीद्वारा गुण्डा नाइकेका रूपमा आरोपित दीपक मनाङेले मनाङबाट प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् भने मीनकृष्ण महर्जन ललितपुर १ ‘ख’ बाट तथा गणेश लामा काभ्रे क्षेत्र नम्बर १ ‘ख’ बाट प्रदेशसभाका उम्मेदवार छन् । टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोप लागेर फरार रेशम चौधरी कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार भएका छन् । सोही घटनाको पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लक्ष्मण थारुले कैलाली–५ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । उनीहरू दुवैले राजपाका तर्फबाट बारेसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।
हेभिवेटसँग को भिड्दैछन् ?
ताप्लेजुङमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईसँग नेपाली कांग्रेसका केशव दाहाल चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । इलाम–२ बाट पाँचौं पटक केन्द्रीय संसद्मा प्रतिनिधि बन्न प्रतिस्पर्धामा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका पूर्व क्षेत्रीय सभापति भूपेन्द्र कट्टेल भिड्दैछन् । त्यसैगरी इलाम–१ मा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका नेता केशव थापा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । झापा–५ मा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नेपाली कांग्रेसबाट पूर्वप्राध्यापक डा. खगेन्द्र अधिकारी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
मोरङमा नेपाली कांग्रेसबाट पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्य तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजाल चुनावी मैदानमा छन् । मोरङ–२ का उम्मेदवार रिजाल ऋषिकेश पोखरेलसँग तथा मोरङ–४ मा आचार्य माओवादी नेता अमनलाल मोदीसँग प्रतिस्पर्धामा छन् । सुनसरी–३ मा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता विजय गच्छदारसँग नेकपा एमालेकी भगवती चौधरी प्रतिस्पर्धामा छिन् भने सुनसरी–४ मा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका विरुद्ध रमेश श्रेष्ठ भिड्दैछन् । सुनसरी–१ मा भने कांग्रेसको समर्थनमा संघीय समाजवादी फोरमका नेता अशोक राईले उम्मेदवारी दिएका छन् । उनको प्रतिस्पर्धामा नेकपा एमालेका नेता जयकुमार राई छन् ।
सप्तरी–२ मा मधेसका प्रभाशाली नेता तथा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पूर्वमन्त्री तथा माओवादी नेता उमेश यादवको चुनावी टक्कर झेल्नुपर्नेछ । सोही क्षेत्रमा राजपाका पूर्व सहमहामन्त्री जयप्रकाश ठाकुरले बागी उम्मेदवारी दिएका छन् । राप्रपा महामन्त्री तथा वर्तमान सरकारका उद्योगमन्त्री सुनिलबहादुर थापाविरुद्ध धनकुटामा वामगठबन्धनका उम्मेदवार राजेन्द्र राई बलिया प्रतिस्पर्धी मानिएका छन् । राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्त ठाकुरको प्रतिस्पर्धा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार विजयकुमार चौधरीसँग हुनेछ ।
ठाकुरको समर्थनमा कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवारलाई फिर्ता बोलाएको छ । नुवाकोट–१ मा नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतविरुद्ध वामगठबन्धनका हितबहादुर तामाङ तथा नुवाकोट–२ मा कांग्रेस नेता अर्जुनरसिंह केसीविरुद्ध नारायण खतिवडा प्रतिस्पर्धामा छन् । सिन्धुपाल्चोकमा राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाविरुद्ध वाम गठबन्धनका शेरबहादुर तामाङ चुनावी मैदानमा छन् भने राणाले कांग्रेसको समर्थन पाएका छन् ।
काठमाडौं–१ मा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकामानसिंहविरुद्ध वाम गठबन्धनका अनिल शर्मा तथा विवेकशील साझाका रवीन्द्र मिश्र भिड्दैछन् । काठमाडौं–२ मा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता माधव नेपालविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद दीपक कुइँकेल चुनावी मैदानमा छन् । काठमाडौं–४ मा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा तथा एमाले युवा नेता राजन भट्टराई आमने–सामने भएका छन् । तनहुँ–२ मा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध वाम गठबन्धनबाट एमालेका जिल्ला अध्यक्ष केदार सिग्देल प्रतिस्पर्धामा छन् । नयाँ जिल्ला नवलपुर–१ का उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. सशांक कोइरालाविरुद्ध वाम गठबन्धनका धनप्रसाद सापकोटा मैदानमा छन् । दाङ–२ बाट माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद राजु खनालबीच प्रतिस्पर्धा छ ।
बर्दिया–१ मा एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतम तथा नेपाली कांग्रेसका सञ्जय गौतम चुनाव लड्दैछन् । माओवादी नेता तथा पूर्वगृहमन्त्रीद्वय जनार्दन शर्मा र शक्तिबहादुर बस्नेत क्रमश: रुकुम पश्चिम र जाजरकोटबाट चुनावी मैदानमा छन् । शर्माले नेपाली कांग्रेसका गोपालजी जंग शाह र बस्नेतले राजीवविक्रम शाहसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डा. आरजु राणा देउवा कैलाली–५ बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छिन् । आरजुको प्रतिस्पर्धा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार एमाले नेता नारदमुनि रानासँग हुनेछ । यस्तै, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल अछाम–१ बाट चुनावी मैदानमा छन्, त्यहाँ उनले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार भरत स्वाँरको टक्करको सामना गर्नुपर्नेछ । सुर्खेत–१ बाट नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्णबहादुर खड्का चुनावी मैदानमा छन् । उनलाई नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष धु्रवकुमार शाहीले टक्कर दिँदैछन् ।